Mustafa Cagjar oo u gooddiyay Galmudug iyo HirShabeelle | KEYDMEDIA ONLINE
Mustafa Cagjar oo u gooddiyay Galmudug iyo HirShabeelle
Mustafa Muxumed Cagjar, Madaxweynaha Dowlad Degaanka, ayaa maanta jeediyay Khudbad uu ku sheegay in Maamullada Galmudug iyo HirSahabeele ayay wali xiriir la leeyihiin Taliskii TPLF.
JIGJIGA - Madaxweynaha Dowlad Deggaanka Soomaalida Mustafa Muxumed Cagjar oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in amniga maamulkiisa ay khatar ku yihiin Kooxda Al-Shabaab iyo wax uu ugu yeeray haraadiga TPLF ay kaga tagtay geeska Africa.
Cagjar, wuxuu Maamuladda Galmudug iyo HirShabeelle ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga xudduudka labada dhinac, wuxuuna si xadfan u sheegay in haraadi ay ka tageen taliskii TPLF, ay ku dhuumaaleysanayaan labadaas maamul.
“Waxaa soo noqnoqonaya isku dayada Kooxda Al-Shabaab iyo Shabakadihii TPLF ay kaga tagtay geeska Afrika oo dhaqdhaqaaqyo badan ka sameynaya dalalka aan dariska nahay, gaar ahaan dhanka Soomaaliya iyo Maamullada.” Ayuu yiri Cagjar.
Maamullada Galmudug iyo HirShabeelle, ayuu ugu baaqay in ay ilaaliyaan heshiisyadii la galay, wuxuuna sheegay in Maamullada uu xusay ay ku dhex jiraan haraadi ay TPLF kaga tagtay, kuwaas oo isku dhacyo degaamayn la xariira ka abuuraya xudduudka.
“Culeyska la soo saarayo dadkeenna waa in la joojiyo, si aysan u imaan in la yiraahdo Soomaalinimadii lagu baaqayay ma sidaas bay noqotay”. Ayuu yiri Cagjar oo u muuqday inuu banneysanayo dhiigga dadka shacabka ah ee xoola dhaqada u badan.
Cagjar oo u muuqday inuu yahay hoggaamiye goodinaya, ayaa sheegay in aysan u dul qaadan doonin dadka xoola dhaqada ah ka imaanaya maamulada Galmudug iyo HirShabeelle ee degaya gobolka Qorrexey iyo gobollada dariska la ah.
Maamullada Jubbalad iyo Puntland oo maamulkiisa la leh xudduud dheer, ma uusan soo hadal qaadin Cagjar, wuxayna qudbaddiisa u muuqatay mid si gooni ah ugu socota, dadka deggan, degaannada, Lababaar, Baarmagoog, Isma-dhaqo, Shilaabo, Gar-cillan, iyo degaanno kale.
Maamulka Dowlad Degaanka ayaa dhibaato joogto ah ku haya shacabka xoola dhaqatada ah ee Xudduudka, waxaana boob ba’an u geysta Ciidamada liyuu Boolis-ka, iyagoo si joogta ah u duuga barkadaha ay xoola dhaqatadu qotaan.